Orodyahanadii Guusha U Soo Hooyay Soomaaliya Oo Muqdisho Loogu Qabtay Kulan Dhirii Gelin Iyo Bogaadin Ah – Goobjoog News
Xildhibaano iyo Wasiiro ayaa kulan bogaadin iyo hambalyo ku aadaneyd guushii Ciyaartooyda xulka qaranka ciyaaraha Fudud ku qabtay caasimada Muqdisho,iyagoo fariimo kala duwan u diray macalimiintii iyo xidigihii soo hooyay gushaas taariikhiga ah.
Hadaba Halkan Ka Aqriso Sida Ay Kaalama U Ka Galeyn Ciyaartooyda Soomaaliya
“Xiriirka Ciyaaraha fudud waxa uu waqti geliyay dhalinyarada sharafka iyo guulaha u soo hoyay qarankeena way naga go’an tahay in aan maal iyo maskax ku bixino xirfadlayaasha matalaya calankeena iminkana waxaa inago soo wajahan tartamo kale waa in aan si wadajir u taageernaa ciyaartooydeena” waxaa sidaas Goobjoog ugu warantay guddomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud Khadiijo Aadan Daahir.
“Dadkan inta badan waxa ay xiisanayaan kubbadda cagta iyo kubbadda kolayga waxa aan ku biiri lahaa wasaaradaha isboorrtiga dalka in xooga saaraan ciyaaraha fudud Soomaaliyana ay guul waaweyn ka gaari karto hadii si dhab loogu soo jeesto waxaa sidaas yiri guddomiyihii hore Gobolka Banaaadir Caddow Gabow horayne u soo noqday xoghayii guddiga Olomikada.
“Aniga oo ku hadlaya magaca wasiirada ciyaaraha Maamul Goboleedyada waxaan idin cadaynaa in aan bogaadinayno dhalinyaradii guulaha kasoo hooyay tartankii ka dhacay Jabuuti waxaan garab taaganay xiriiida iyo wasaarada ciyaaraha dowladde dhexe si maqaaka aan iminka joogo ugu hormarino” waxaa sidaas yiri Cali Dhuux Maxamed oo bishii lasoo dhaafay loo magacaabay wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada Koonfur Galbeed.
Wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada dowladda Khadija Maxamed Diiriye ayaa bogaadisay xidigaha ciyaaraha fudud,iyadoo balan qaaday in ay dowladda garab taagan tahay ciyaartooyda kala gedisan ee caalamka ugu qeyb galaya tartamada heer qaran.
Xulka qaranka cayaaraha Fudud ee guulaha keenay ayaa xero tababar oo gudaha dalka waxaa sanadki 2017 ugu diyaariyay Guddiga olombikada qaranka Soomaaliyeed halkaas oo ay tababar ku qaadanayeen muddo sanad ah , waxaana kadib loo wareejiyay dalalka Kenya iyo Ehtiopia si ay tababarro heerkoodu sareeyo u helaan taasoo sahashay guushan taariikhi ah
Halkan Ka Daawo Hadaladii Dhiira Gelinta Ahaa AY Direyn Madaxda Isboortiga Dalka
Senator Qeybdiid "Hala Joojiyo Dagallada Xeraale Iyo Cadalle"